बलिउडकी सर्वाधिक धनी र सुन्दरी नायिका एश्वर्याको पढाइ कति ? थाहा पाउनु भयो भने तीन छक्क पर्नुहुनेछ ! – दैनिक नेपाल न्युज
बलिउडकी सर्वाधिक धनी र सुन्दरी नायिका एश्वर्याको पढाइ कति ? थाहा पाउनु भयो भने तीन छक्क पर्नुहुनेछ !
एजेन्सी । बलिउडमा एक छत्र राज गरेकी चर्चित नायिका हुन् ऐश्वर्या राय बचन । उनि बलिउडकी एक सफल नायिक समेत रहेकी छिन् । उनको जन्म १ नवम्बर १९७३ को मैंगलूर, कर्नाटकमा भएको हो । उनले फिल्म प्यार हो गया बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी हुन् ।
उनि संसारको सबैभन्दा सुन्दर महिलाको पहिलो नम्बरमा पर्छिन् अमिताभ बच्चनकी बुहारी समेत रहेकी उनको एक वर्षमा लगभग ३५ मिलियन डलर कमाउछिन् । उनले खासमा धेरै पढेकी छैनन् । उनले जम्मा १२ मात्र पढेकी छिन् । उनि बलिउडमा सबै भन्दा कम पढने नायिका मा एक हुन् । ऐश्वर्या सुन्दरी भएपनि वास्तवमा कम नै अध्यान गरेकी छिन् ।